Fantaro i Benson KC Fang, hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 24 ka hatramin’ny 30 Septambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2019 13:06 GMT
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Benson KC Fang (@cwch) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Nanomboka nianatra ny Welsh (Cymraeg) tany amin'ny oniversite aho ary taty aoriana ny Kavalan (Kbalan) – ilay fitenin'ny indizeny avy any amin'ny tanindrazako Ilan – na dia voalohany amin'ny fitantanana ny rafi-panangonam-baovao (MIS) aza. Noho ny finamanako tamin'ireo vahoaka Taivoan tato ho ato dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny fitenin'izy ireo izay matoritory aho, ilay nampiasaina tany atsimon'i Taiwan taonjato maro lasa izay.
Nanjary fiteny matoritory ny Taivoan (tvx) nanomboka tamin'ny taonjato faha-19 noho ny fifandraisan'ny olona tamin'ireo Shinoa mpifindra monina. Ankehitriny misy ny fiezahana hamelomana indray ilay fiteny miaraka amin'ny sangan'asa nangonina avy amin'ny antontan-taratasy ara-tantara. Nisy ny fampianarana manokana momba ny fiteny. Voafehy tsara miaraka amin'ny lahatsoratra miisa 800 eo ho eo ny fikotrehana Taivoan Wikimedia.
Fiteny Taivoan: https://en.wikipedia.org/wiki/Taivoan_language
Fikotrehana Wikimedia Taivoan: https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/tvx/Main_Page
The Taivoans have not yet been recognized as indigenous people by Taiwan's central government, and therefore more obstacles arise that are to be confronted in terms of language revival, as compared to the officially recognized 16 indigenous peoples groups in Taiwan. I will talk about this issue more during my week. Also, I will cover a little on how we have successfully had SIL International recognize Taivoan as an independent language — as it was regarded as just a dialect of Siraya language previously.
Tsy mbola nankatoavin'ny governemanta foibe ao Taiwan ho toy ny vahoaka indizeny ny Taivoans , ary misy noho izany ny sakana maro hafa izay tokony atrehina amin'ny resaka famelomana aina ny fiteny, raha ampitahaina amin'ny vondrom-poko indizeny miisa 16 izay nahazo fankatoavana ofisialy any Taiwan. Hiresaka momba io olana io bebe kokoa aho mandritra ny herinandroko. Ary ho hazavaiko kely ihany koa ny fomba nahazoanay tamim-pahombiazana ny fankatoavana ny Taivoan ho toy ny fiteny mahaleotena avy amin'ny SIL iraisam-pirenena – satria noheverina ho toy ny fitenim-paritra fotsiny avy amin'ny fiteny Siraya izany teo aloha.
Na dia tena odiana tsy fantatra tokoa aza ilay fiteny eo amin'ny sehatry ny governemanta dia mino aho fa afaka manampy amin'ny fanaovana antso hisarihana ny sain'izao tontolo izao momba ny toe-javatra iainan'ny Taivoan ny Aterineto, toa ny ezaka efa nataoko tao amin'ny Wikimedia Incubator sy ny Wikipedia. Antenaina fa hanao ezaka bebe kokoa ny governemanta hamelomana aina indray ilay fiteny miaraka aminay amin'ny hoavy ary hankatoa ny satany ofisialy ihany koa.